भरपेट खाएर पनि कसरी बच्ने मोटोपनबाट ? | सुदुरपश्चिम खबर
भरपेट खाएर पनि कसरी बच्ने मोटोपनबाट ?
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : भदौ १७, २०७८ 13
खानेकुरालाई बिस्तारै चपाएर, हतार नगरी, आनन्दसाथ खानुपर्छ । लामो समय खाली पेट बस्ने र एकसाथ धेरै खानेकुरा खानु हुन्न । थोरै थोरै तर धेरै पटक खानु राम्रो हो । यदि खानेकुराको सन्तुलन र शैली मिलाउने हो भने भरपेट खाएर पनि शरीरको तौल सन्तुलित राख्न सकिन्छ । अनलाइनखबर बाट सभार